Ndị Taliban dị njikere ịmalitegharị ọrụ ọdụ ụgbọ elu Kabul 'n'ime ụbọchị ole na ole'
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi na Afghanistan » Ndị Taliban dị njikere ịmalitegharị ọrụ ọdụ ụgbọ elu Kabul 'n'ime ụbọchị ole na ole'
Akụkọ na -agbasa ozi na Afghanistan • Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
n) Taliban dị njikere ịmaliteghachi ọrụ ọdụ ụgbọ elu Kabul 'n'ime ụbọchị ole na ole'
United States kwụsịrị ịpụpụ ndị nkịtị na Kabul na ozi ha niile na Afghanistan na August 30.
Ndị Taliban ga -amalitegharị ọrụ n'ọdụ ụgbọ elu mba Khamid Karzai.
Ọdụ ụgbọ elu Kabul ga -arụ ọrụ n'ime ụbọchị.
Ndị Taliban weghaara Kabul na Afghanistan dum na August 15.
Onye nnọchi anya ndị Taliban kwupụtara taa na ọdụ ụgbọ elu mba Kabul Hamid Karzai ga -amalite ọrụ nkịtị n'ime ụbọchị ole na ole.
“Anyị dị njikere ịmaliteghachi ọrụ ọdụ ụgbọ elu. Anyị ga -eme ya n'ime ụbọchị ole na ole, ”Anas Haqqani, onye isi ndị otu Taliban kwuru na N'ajụjụ ọnụ.
Haqqani kọwara mwepụ nke ndị agha US na Afghanistan dị ka "nnukwu" ihe omume ma kpọọ ụbọchị mgbapụ kwụsịrị ụbọchị "akụkọ ihe mere eme".
United States kwụsịrị ịpụpụ ndị nkịtị na Kabul na ozi ha niile na Afghanistan na August 30. Mkpebi ịkwụsị ọrụ US na Afghanistan nke malitere na Ọktoba 2001 wee bụrụ mkpọsa US kachasị ogologo na mba ofesi na akụkọ ihe mere eme ka Onye isi ala Joe Biden kwupụtara na. Eprel 14, 2021.
Mgbe ekwuputara mkpebi a, ndị Taliban bidoro mwakpo ndị agha gọọmentị Afghanistan. N'August 15, ndị agha Taliban batara na Kabul na -enweghị nsogbu ọ bụla, wee nweta ikike zuru oke n'isi obodo Afghanistan n'ime awa ole na ole.
Ọdụ ụgbọ elu mba Hamid Karzai, nke a makwaara dị ka HKIA, dị kilomita 3.1 (kilomita ise) site na etiti obodo Kabul na Afghanistan. Ọ na -eje ozi dị ka otu n'ime ọdụ ụgbọ elu mba dị iche iche nke mba ahụ na dịka otu n'ime ntọala ndị agha kachasị ukwuu, nwere ike ịnwe ihe karịrị otu narị ụgbọ elu.
A na -akpọbu ọdụ ụgbọ elu mba Hamid Karzai Kabul International Airport na mpaghara dị ka ọdụ ụgbọ elu Khwaja Rawash, n'agbanyeghị na ụfọdụ ndị na -anya ụgbọ elu na -aga n'ihu na -akpọ ya aha ikpeazụ. Enyere ọdụ ụgbọ elu aha ya ugbu a na 2014 iji kwanyere onye isi ala ugwu Hamid Karzai.